अाज नेपाल आइडलको अन्‍तिम भिडन्त – मुलधार न्युज
Home > कला > अाज नेपाल आइडलको अन्‍तिम भिडन्त
अाज नेपाल आइडलको अन्‍तिम भिडन्त
६ आश्विन २०७४, शुक्रबार १४:३०
घरघरको दिनचर्या बन्न पुग्यो, नेपाल आइडल । त्यस्तो संगीत उत्सव– जसको चर्चाबिना सायद कुनै पनि नेपाली घरको खाना, खाजा र आरामको हिस्सा पूरा भएन । टीभी हेर्नेको जीवनशैलीमा यत्रो फरक पारिदिने रियालिटी सोमा स्वयं भिड्ने प्रतिस्पर्धीको जीवनमा झन् कत्ति फरक पर्‍यो होला ! र, खास फरक अब पर्नेवाला छ । किनकि, ग्रान्ड फिनालेमा पुगेका तीन प्रतिस्पर्र्धीमध्ये जो नेपाल आइडलको हकदार भए पनि गाला राउन्डका बाँकी नौ समेतले सांगीतिक जीवनयात्राको बाटो समाइसकेका छन् । नेपाल आइडलसँगै यी नयाँ स्टारहरूको वास्तविक यात्रा अब शुरु भएको छ । निर्णायक इन्दिरा जोशीले सात महिना लामो नेपाल आइडलको अनुभव सुनाइन, ‘धेरै ठूलो अवसर हो यो । प्रतिस्पर्धीले नाम चलेका गायकगायिकाले जस्तै ‘एक्स्पोजर’ पाउनुभयो । गीतसंगीतमा उहाँहरूको भविष्य राम्रो छ ।’
गायिका जोशीको भनाइ र प्रतिस्पर्धीबारे देश–विदेशबाट भएको चर्चाले पनि विश्वचर्चित टेलिभिजन फ्रेन्चाइज आइडलको नेपाली संस्करण ‘नेपाल आइडल’ जित–हारको प्रतियोगिता मात्र सीमित भएन । यो त नेपाली सांगीतिक आकाशको ‘ठूलो उत्सव’ नै बन्यो । ६ असोजमा कतारको राजधानी दोहामा ‘ग्रान्ड फिनाले’का प्रताप दास, निशान भट्टराई र बुद्ध लामामध्ये एक विजेता हुनेछ । ललितपुर गोदावरीका प्रताप, झापाका निशान र पोखराका बुद्ध मात्र होइन, देशैभरिबाट छनोट गरिएका एक सय ५१ मध्ये ‘क्लोज क्याम्प’को अवसर पाएर ‘गाला राउन्ड’सम्म पुग्नेले सेलिब्रिटीकै हैसियत राखे । कतिले त नेपाल आइडलको प्रारम्भिक छनोटमै पनि चर्चा बटुले । यसले पनि ‘नेपाल आइडल’ सांगीतिक क्षेत्रको प्लेटफर्म बनेको सहजै बताउन सकिन्छ, संगीत सिक्ने र सिकाउने सबैका लागि अनि दर्शकलाई भरपूर मनोरञ्जन ।
‘सबैमा नेपाल आइडलको क्षमता’ देख्ने अर्का निर्णायक तथा संगीतकार कालिप्रसाद बास्कोटा प्रतिस्पर्धीलाई गीतसंगीतमा निरन्तरता दिन सुझाव दिन्छन् । भन्छन्, ‘नेपाल आइडल जोसुकै बने पनि संगीतमा उनीहरूले राम्रो हैसियत प्राप्त गरिसकेका छन् ।’नेपाल आइडलका अन्तिम तीन प्रतिस्पर्धीलाई कतार उड्नुअघि तीनकुनेस्थित कर्पोरेट टावरमा बिदाइ गर्दै अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले नेपालका कुना कन्दरामा लुकेर रहेका प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेलिभिजन कार्यक्रम गराउन सकेकोमा गौरव व्यक्त गरे । ‘नेपालमा सञ्चालित अन्य सांगीतिक कार्यक्रम स्थानीय रूपले मात्र चल्थ्यो, तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयोजना गरेका छौँ ।
तस्‍बिर : उमा विष्ट
त्यसैले यसको ‘ग्ल्यामर’ छुट्टै छ, अब तपाईंहरूले नेपालकै शान बनेर नाम राख्नुहोला,’ थापाले शुभकामना दिँदै भने ।नेपाल आइडलले देशलाई संगीतमय बनाएको एपीवान टीभी निर्देशक सुरेश पौडेलको दाबी छ । सामाजिक सञ्जालमा आइडलबारे धेरै बहस भए, मनपर्ने प्रतिस्पर्धीको फोटो राख्दै आत्मीयता देखाइयो । यूट्युबमा लाखौंले आइडल/एपिसोड हेरे । धेरैले यसलाई मनपराए भने कतैकतै आलोचना पनि सुनियो । अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, तर फैसलाले नेपाल आइडललाई कुनै बाधा पारेन ।आलोचना र प्रंशसा दुवैले आइडललाई नै सहयोग पुर्‍याएको र पाठ पनि सिकाएको बताउँछन्, पौडेल ।
सिकाइ र खुशी
संगीतकार न्ह्यू बज्राचार्यलाई पनि नेपाल आइडलले धेरै सिकाएको अनुभूति छ । प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए पनि कसरी सकारात्मक रूपमा उपस्थित भइरहने भन्ने कुरा आइडलका सहभागीहरूबाट सबैले सिक्नुपर्ने उनले बताए । भन्छन्, ‘असल कलाकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले देखाएका छन् ।’ नेपाल आइडलबाट बाहिरिएकाहरू र मञ्चमै हुनेबीचको आत्मीयता र सहयोग सराहनीय रहेको न्ह्यूको भनाइ छ । नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धीहरूलाई रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएका सूर्य गुरुङलाई पनि सबै प्रतियोगी परिवारकै सदस्यझैं लाग्यो । उनी पनि पछिल्ला हरेक शुक्रबार उनी रोएका छन् । आफूले गोडमेल गरेका ‘फूलहरू’ एकएक गरी बाहिरिँदा आँशु नथामिने बताउछन्, उनी । ‘टप १८’ सम्म आइपुग्दा हरेक प्रतिस्पर्धीहरूसँग गाढा सम्बन्ध बसिसकेको थियो । उनीहरूले ‘च्याट ग्रुप’ नै बनाएर कुराकानी गर्न थालिसकेका थिए ।
‘नेपाल आइडल’ जित–हारको प्रतियोगितामा मात्र सीमित भएन। यो त नेपाली सांगीतिक आकाशको ‘ठूलो उत्सव’ नै बन्यो।
नेपाल आइडल शुरु हुनुभन्दा लगभग १ वर्ष पहिलेदेखि यसका लागि ‘वर्कसप’हरू सञ्चालन गरियो । त्यतिवेला नेपालभर म्युजिकको वातावरण कस्तो थियो भन्ने कुरा बुझिएको सुनाउँछन, ट्यालेन्टहेड करण राजकर्णिकार । लामो समयसम्म गरेको त्यो मिहिनेत अहिले सफल भएको बताउँछन्, उनी । भन्छन्, ‘आइडलले उचाइ लिँदा गर्व महसुस भएको छ ।’ उनले आइडलहरूलाई ‘टङ प्राक्टिस’ गराउनुका साथै गीतको भाव, सुर, कसरी गाउने भन्ने कुरा सिकाउँदै आएका छन् । आइडलहरूलाई म्युजिक रियाज गराउने राजकर्णिकार भन्छन्, ‘उनीहरू एकदमै मिहिनेत गर्थे । त्यसैले यहाँसम्म आइपुगे ।’ म्युजिक क्लास लिएर आएका र नलिई आएकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सिकाउँदा उनलाई केही गाह्रो महसुस भएको थियो । तर, बाहिरकालाई भन्दा आइडलमा आएकालाई सिकाउन सहजै भयो ।
आइडलका सहभागीहरू अत्यन्तै मिलनसार रहेकाले आफूलाई काम गर्न सहज भएको अनुभव सुनाउँछन्, पेशलकुमार शर्मा । नील डेभिडमा आबद्ध शर्माले आइडलका सहभागीहरूको मेकअपमा सहयोग गरिरहेका छन् । ‘मीठो गीत गाए पनि उनीहरूलाई राम्रो देखाउने जिम्मा हाम्रो थियो । किनकि, उनीहरूलाई स्टारजस्तो देखाउनुपथ्र्याे,’ उनले थपे, ‘आफूले मेकपअ गरेका अनुहारहरू अहिले सेलिब्रिटी भइसक्दा खुशी लाग्ने रहेछ ।’
नेपाल अाइडल जातीय आइडल नबनाइयोस् : बुद्ध लामा
अन्तिम तीनमा आइपुग्दा कस्तो महसुस हुँदैछ ?
एकदमै मजा आइरहेको छ, गर्व लागेको छ । बाबा ममीले देखेका सपनाहरू पूरा हँुदै गदै गइरहेका छन् । कुनै कुनै खुशी व्यक्त गर्न शब्द नै हुँदैनन् । मलाई अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । मलाई नेपाल आइडलको ‘टप १०’ सम्म नै आइपुग्दिनँ होला भन्ने लागि रहेको थियो । निर्णायकहरूले पनि मलाई माया गरिदिनुभयो । यसका साथै दर्शकहरूले पनि मेरो आवाज मन पराइदिएर भोट दिनुभयो र म यहाँसम्म आइपुगेँ । पहिला–पहिला त्यति धेरै दर्शक र निर्णायकहरूका अगाडि नर्भसजस्तै हुने रहेछ । शुरुमा मञ्चमा चढेर गीत गाउन खोज्दा त ‘कुल’ हुन्छु भन्दा पनि सकेकै थिइनँ । मुटु ढुकढुक गरेको थियो । उहाँहरू हामीभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ । उहाँहरूको सामुन्ने गीत गाउनुपर्दा डर लाग्दो रहेछ । पछिपछि बानीजस्तै भयो, त्यसपछि आरामले गाउन थालियो ।
अडिसन पास हुँदा परिवार र साथीहरूको प्रतिक्रिया के थियो ?
अडिसन दिन जाँदा नेपाल आइडल नै हुन्छ/हुँदैन भन्ने शंका लागिरहेको थियो । त्यतिवेला हामीलाई सानो प्रोजेक्ट देखाइयो र म ढुक्क भएँ । त्यसपछि अडिसनमा छानिएँ । गोल्डेन कार्ड लिएर घर आएँ । यो थाहा पाएर आमा धेरै खुशी हुनुभयो । बुवाआमा, दिदी भिनाजुले सधैं साथ अनि प्रेरणा दिइरहनुभयो । साथीहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो । उनीहरू सबैसँग ‘तँ’ नै चल्थ्यो । नेपाल आइडलको चर्चा हुँदै गर्दा पनि हरेक दिन उनीहरूले मलाई ‘बुद्धे तँ नेपाल आइडलमा जानुपर्छ’ भनेर भनिरहन्थे । उनीहरू त मलाई काठमाडौंबाट कार चढेर आउनुपर्छ भन्थे । अहिले पनि हामी रमाइलो गर्छौँ । फोनमा पनि कुरा भइरहन्छ । म बद्लिएको छैन ।
पहिलकै बुद्धे हँु । बरु ती बच्चैदेखिका साथीहरूले अहिले मलाई ‘तपाईं’ भन्न थालेका छन् । उनीहरूलाई गाली गर्छु, मलाई ‘तँ’ नै भनेर बोला भन्छु । तँ ठूलो भइस्, हामी जहाँको त्यहीँ छौँ भन्छन्, उनीहरू । उनीहरूले मलाई सधैं सहयोग गरे । अहिले पनि गरिरहेका छन् । भर्खरै म पोखरा गएँ । एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किँदा त सम्पूर्ण पोखरेली उर्लिएर आएजस्तो लाग्यो । काँधले थेग्न नसक्ने माला लगाइदिए । घर पुग्दा त एकछिन बोल्न सकिनँ, आमा पनि बोल्नै सक्नुभएन । मेरो आँशुबाटै मैले सबैथोक भनेँजस्तो लाग्यो ।
तपाईंलाई कस्ता खालका मान्छेले समर्थन गरे होलान् जस्तो लाग्छ ?
म पोखरा जाँदा होस् या काठमाडौंमै हुँदा, सबैथरीकाले मलाई मन पराइदिनुभयो । अहिले जातीय कुरा एकदमै आइरहेको छ, तर त्यस्तो होइन । निशानलाई पनि मगर, गुरुङ, राई सबैले सहयोग गरिरहेकै छन् । त्यस्तै, प्रतापलाई पनि सबैथरीका मान्छेको सहयोग छ । म जब पोखरा गएँ, मलाई बाहुन, क्षत्री, राई, लिम्बू सबैले माया गरिदिनुभयो । नेपाल आइडललाई जातीय आइडल नबनाइयोस् । नेपाल आइडल बन्नुपर्छ जातीय आइडल होइन ।
साथीहरू बाहिररिँदा कस्तो अनुभव भयो ? को बाहिरिँदा सबैभन्दा नराम्रो लाग्यो ?
उल्सन श्रेष्ठ दाइले हरेक कुरामा सम्झाउनुहुन्थ्यो । ‘मेचुअर’ हुँदै जानु पर्नेदेखि कसलाई कस्तो व्यवहार गर्नेसम्म सिकाउनुहुन्थ्यो । हरेक कुरामा उहाँले हेरविचार गर्नुभयो । उहाँ बाहिरिँदा एकदमै नराम्रो लागेको थियो । आफूलाई गाइड गर्ने मान्छे बाहिरिदा आँशु आउने रहेछ । बाहिरबाट हामी जुधिरहेको देखिए पनि हामी एकदमै मिलेर बसेका छौँ । कुनै नराम्रो छैन ।
नेपाल आइडल पनि सकिँदैछ । अब संगीतलाई कसरी लिएर अघि बढ्नुहुन्छ ?
नेपाल आइडलले एउटा बाटो खोलिदिएको छ । अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छु । अब भविष्यमा योभन्दा राम्रो गर्न चाहन्छु । गला अझै तिखार्छु । अब म संगीत छाडेर बस्न सक्दिनँ । जे–जति गर्छु यहीँ गर्छु यसैमा गर्छु, अझै राम्रो गर्छु ।
अब दुःख भोग्नुपर्ने छैन : निशान भट्टराई
केही समयअघि तपार्इंले नेपाल आइडलका साथीहरू परिवारको सदस्यजस्तै भइसककेका छन् भन्नुभएको थियो । अहिले पनि परिवारकै सदस्य हुन् कि प्रतिस्पर्धी ?
अहिले हामी नेपाल आइडलका लागि हिँडिरहेका छौँ । आइडल नभएको भए एक अर्कालाई भेट्थ्यौँ कि भेट्दैनथ्यौँ शंकै छ । यहाँ आइसकेपछि हाम्रो मित्रता अहिले पनि उस्तै छ । सम्बन्ध एकातिर छँदैछ, गीत पनि राम्रो गाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । प्रतिस्पर्धीको रूपमा भन्दा पनि मैले राम्रो गीत गाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । म आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु, साथीहरूसँग हैन । अरू साथीहरूसँग मेरो कुनै पनि तुलना हुँदैन । साथीहरू आफ्नो ठाउँमा ठीक हुनुहुन्छ, म आफ्नो ठाउँमा ठीक छु ।
‘राउन्ड–३’ मा आइपुग्दा सबैभन्दा कम मत तपाईंको थियो । यस्तो किन भयो जस्तो लाग्छ ?
यसको खास उत्तर मसँग छैन । धैरैको संख्यामा मलाई मन पराइदिए । भोट गर्दा मेरो मत कम आएको साँचो हो । तर, म यसलाई कम मत मान्दिनँ । मलाई आएको मत निकै धेरै हो । तुलनात्मक रूपमा भने मेरो कम हो । चार जनामा तेस्रो नम्बरमा मेरो नाम आयो । तर, यसको अर्थ मेरो शुभचिन्तकहरूले मलाई भोट नै हालेनन् भन्ने हैन । उहाँहरूले मलाई भरपूर सहयोग गर्नुभएको हो । म मेरो भोट थोरै हो भन्दिनँ, मेरो साथीहरूको बढी आएको हो भन्छु ।
फ्यानहरूको म्यासेज, फोन कति आउँछ ? उनीहरूलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ?
फोन, म्यासेज त एकदमै आउँछ । यस्तो होला भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ । उहाँहरूले नै मलाई माया गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो । आफ्नोबारे के भइरहेको छ र आफूलाई कुन रूपले हेरिरहेका छन् भनेर जान्ने सजिलो माध्यम त अहिले सामाजिक सञ्जाल भएको छ । त्यहाँ पनि मलाई माया गर्नेहरू धेरै हुनुुहुन्छ । म्यासेज गरिरहनु हुन्छ । केही समयअघि म पूर्व गएँ, त्यहाँ पनि मलाई माया गर्नेहरू धेरै नै थिए । चार महिना अघिसम्म मलाई खासै कसैले पनि चिन्दैन थिए, तर यो बीचमा एकै ठाउँमा बसेर बाहिर निस्कँदा त मप्रतिको क्रेज देखेर म आफंै छक्क परेँ । अहिले सबैभन्दा व्यस्त मेरो फोन भएको छ । प्रायः सबैसँग कुरा गर्छु ।
घरबाट कस्तो सहयोग पाइरहनुभएको छ ?
मलाई त लाग्छ, संगीतमा लाग्न चाहने सबैले मेरोजस्तै बाबुआमा पाऊन् । म संगीतमा लाग्छु भन्दा परिवारबाट कहिल्यै असहयोग भएन । अहिले आइडलमा आइसकेपछि त उहाँहरूको सहयोग झनै बढेर गएको छ । मेरो बुवा मलाई नेपाल आइडल बनाउन एकदमै खटिएर लाग्नुभएको छ । छोरालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै बुवालाई भेट्नेहरू पनि धेरै छन् रे ।
नाम चलेका गायकहरूसमेत तपाईंको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । तपार्इं आफै आफ्नो गायनप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मैले मानसम्मान गर्ने मेरा अग्रजहरूले मेरो आवाज मन पराइदिनुभएको छ । साथ दिइरहुनभएको छ । उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु । मेरो गायनप्रति म सन्तुष्ट नै छु । कहिलेकाहीँ बाहिरी कुराहरूले मेरो गायनमा प्रभाव पारेर
विजयको तिर्खा पानीजस्तै : प्रताप दास
नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभाव कसले पार्‍यो ? किन ?
सबै साथीहरूले केही न केही प्रभाव पारे । तर, अन्तिम पटक सागर आलेमगर बाहिरिँदा साह्रै नराम्रो लागेको थियो । हामी रुम पार्टनर पनि थिर्यौँ । शुरुदेखि नै राम्रो सम्बन्ध बनेकाले हरेक कुरा सेयर गथ्र्याैँ । ऊ एउटा असल मान्छे हो । सबैको भलो चिताउँथ्यो । जो बाहिरिँदा पनि सबैभन्दा दुःखी उही बन्थ्यो । बरु आफैं बाहिरिँदा दुःखी बनेन, हाँसेरै नेपाल आइडलको मञ्च छोड्यो । ऊ मेरो ‘आइडल’हो जस्तो लाग्छ । धेरै प्रभाव पारेर बिदा भयो ऊ ।
तपाईं ५ पटक ‘डेन्जर जोन’मा पर्नुभयो । त्यतिवेला मनमा कस्ता कुरा खेल्दा रहेछन् ?
शुरु–शुरुका डेन्जर जोनले एकदमै ‘नेगेटिभ भ्वाइस’ ल्याउने रहेछ । म डेन्जर जोनमा छु भन्ने थाहा पाएपछि दर्शकले मलाई भोट नै गर्दा रहेनछन् भन्ने कुरा मनमा खेल्न थाल्छन् । मैले यति धेरै मिहिनेत गर्दा पनि मान्छेहरूले मन पराइदिनुभएन भन्ने कुराले तनाव दिन्थ्यो । तर, डेन्जर जोनमा पर्नु भनेको पाठ सिक्नु पनि रहेछ । अर्काे राउन्डको लागि चुनौती हुँदो रहेछ । जस्तो : म डेन्जर जोनमा पर्दा दर्शकले सोच्छन्, ‘यति राम्रो गाउने पनि डेन्जर जोनमा पर्‍यो ।’ त्यसपछि उहाँहरूले पनि भोट गर्न थाल्नुहुन्छ । यो ‘प्लस पोइन्ट’ हो ।
संगीतमा लागेर तपार्इंले के पाउनु, के गुमाउनु भयो ?
मान्छेहरूको एउटा न एउटा सपना हुँदो रहेछ । आफूले राम्रो काम गरेर सबैका अगाडि चिनिन मनलाग्दो रहेछ । त्यो अहिले अनुभव गर्दैछु । संगीतमा लागेर पाएको सबैभन्दा ठूलो कुरा भने सन्तुष्टि हो । बरु गाली नै खाएर पनि यसमा लागेपछि सन्तुष्टि पाइयोे । मलाई यति धरै माया गर्नेहरू पाएको छु, यो ठूलो सफलता हो । संगीतमा लागेर गुमाएका चिजबारे मैले सोचकै छैन । संगीतकै लागि सानैदेखि मिहिनेत गरियो । अहिले पनि यसैमा लागिरहेको छु । नेपाल आइडलले मेरो मात्र हैन, धेरैको प्रतिभालाई बाहिर ल्याएको छ । संगीतमा लागेर गुमाएको भन्दा पाएका चिजहरू पो धेरै छन् कि !
संगीतमा लागेर कस्तो भविष्यको कल्पना गर्नुभएको छ ?
अहिलेसम्म राम्रै भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल आइडलले मलाई एउटा हैसियत दिएको छ । धेरैले चिन्छन्, माया गर्छन्, मेरो आवाज सुनिदिन्छन् । यसरी हेर्दा संगीतमा राम्रो भविष्य देख्छु । अब विगतको जस्तो तनाव खेप्नु नपर्ला भन्ने कल्पना गरेको छु । म अब रातरात परिवर्तन भएँ भन्न खोजेको हैन । तर, अब जिन्दगी अलि सहज तरिकाले चल्छ होला भन्ने लाग्छ ।
जितको नजिक आइसकेपछि कस्तो अनुभूति हुँदोरहेछ ?
जित्ने भन्ने कुरा तिर्खाएको मान्छेजस्तो हो । जब हामी शुरुमा अडिसन दिन आयौँ, कसरी छानिने होला भन्ने पीर थियो । छानिएपछि कसरी ‘टप १८’मा पुग्ने भन्ने भयो । त्यसपछि ‘टप१०’ सम्म कसरी आइपुगिएला भन्ने डर थियो । त्यसरी ‘टप ५’ सम्म पनि आइपुग्यौँ । अहिले ‘टप ३’मा छौँ । नेपाल आइडल बन्छु भन्ने सपना मसँग पनि छ र अन्य साथीहरूमा पनि होला । बुद्ध र निशान दुवैमा नेपाल आइडल बन्ने क्षमता छ । मेरो विकल्प छैन भन्नै सक्दिनँ ।
नेपाल आइडलपछिको जिन्दगीलाई कसरी लैजाने विचार गर्नुभएको छ ?
म संगीतमा लागिरहेको थिएँ । र, त्यसका लागि एउटा प्लेटफर्म खोजिरहेको थिएँ । नेपाल आइडलले त्यो प्लेटफर्म दियो । नेपाल आइडल र दर्शकलाई मेरो बाबाआमाको रूपमा हेर्छु । नेपाल आइडलले हामीलाई पुनर्जन्म दियो र आफ्नो खुट्टामा टेक्ने बनाइदियो । अहिलेसम्म त हामीले आफ्नो काम देखाउने मौका पाएकै छैनाँै । अरूकै गीत गाइरहेका छौँ । तर, नेपाल आइडलपछि अब आफ्नै काम देखाउने मन छ । म संगीत त छाड्न सक्दिनँ । बरु संगीतमै लागेर देशका लागि केही गर्न सक्छु कि !
-अन्नपूर्ण टुडेबाट साभार
–लेखक : किरण दहाल
राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभा आजदेखि
खराब मौसमका कारण त्रिभुवन विमानस्थल अवरुद्ध
उत्तर कोरियालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध
पत्रकार गिरफ्तारीको कांग्रेसद्वारा भर्त्सना, तत्काल रिहाई गर्न माग
रवि लामिछाने र निलम्बित डिएसपी जिसीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्धा दायर
रेडियो नेपालको मूल गेटमा ताला, ९ पत्रकार गिरफ्तार
एउटा बैंकको एटिएम कार्ड अर्कामा नचल्ने
विशेष अदालतमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे गोपाल खड्का
वन कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्दा
१३औँ सागका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट छानिए ४४ खेलाडी
धादिङको धार्केमा अज्ञात समहुद्धारा दुईवटा कन्टेनरमा आगजनी !
दुई जर्नेलको राजीनामा, रथी पद दुई महिनादेखि रिक्त : को बन्ला सेनाको थ्री स्टार जर्नेल ?
२४ तोला सुनसहित २ पक्राउ
४ वर्षमा पनि बनेन ७ सय मिटर बाटो !
चिकित्सक सेवामा फर्किने पूर्वराष्ट्रपति डाक्टर यादवको संकेत
निर्मला हत्या प्रकरणः ४ जनाको डीएनए रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’
बिप्लबले गाडे चुडामणिको घरमा कालो झण्डा, सम्पत्ती रास्ट्रीयकरण गर्न चेतावनी !!
प्रधानसेनापति थापाद्धारा संसदीय समितिलार्इ समसामयिक विषयमा जानकारी